ट्रम्पको कंक्रीट जडानहरू - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
ट्रम्पको कंक्रीट जडानहरू
डिसेम्बर 1, 2020 नोभेम्बर 30, 2020 फ्रिट्ज लमौर ब्लग, डोनाल्ड ट्रम्प, विशेष समाचार, राजनीति
डोनाल्ड मालिकको कुरा गरिरहे।
टापुमा विन्डो बाहिर धुँदै।
तर ऊ 775k मा आयो; सब भन्दा कम बोली।
द्रुत अस्वीकरण: (नाम र ठाउँहरू सबै परिवर्तन गरिएको छैन। तिनीहरू यस कथाको तल उत्तर पुस्तिकामा थपिएका छन्। त्यसोभए तपाईं पनि 'डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा मलाई कती जान्दछु' ट्रिभिया खेल खेल्न सक्नुहुन्छ।)
जब मानिसहरू भीडको बारेमा सोच्दछन्, तिनीहरू प्राय: रगतको कसम, डबल क्रॉसिंग, अत्याचार हिंसा, हत्या, मेहेम र अधिकको चित्रण गर्दछन्। के बुझिएको छैन कि तिनीहरूले कल्पना गरेका सबै 'अर्थ' हुन्: र 'अन्त्य' 'सम्मान' वा 'सामर्थ्य' होइन, हो। यो 'पैसा' हो। यही नै ला कोसा नोस्ट्राका प्रत्येक सदस्यलाई उनीहरूको कुराको शुरू देखि नै प्रेरित गरिएको छ। र कुनै श doubt्का छैन, यो के हो जसले एक वास्तविक वास्तविक १) ____________ ____________ ____________।
अगस्त १ 15, १ 1911 ११ का जन्म, उहाँ हार्लेम उत्पादन हुनुहुन्थ्यो; फिर्ता हुँदा जब प्यासनहरू अझै ११ 116 औं बाहिर जान्छन्। उनी भाग्यशाली थिए। उसको बटन २ द्वारा ठोकरिएको छ) ___________ ______ _________, एक धेरै शक्तिशाली)) _______ कपो। उसको क्यापो ′ ida डिग्रीमा राम्रो फ्लोरिडा उडान पछि, ११ for औं सडक चालक दल उनलाई सुम्पिए। प्रत्येक बिहान, पाल्मा ब्वाईज सामाजिक क्लबको अगाडि, अदालत उनी र उनका गुंडहरूसँग भेट गर्दछ।
नम्बरको र्याकेट चलाउनुको साथसाथै, उनले 4) सँगको साझेदारी गरे) _____ _____ __________,)) _____________ न त तयार मिक्स्रीट निर्माण व्यवसाय सुरू गर्न उनीहरूले बोलाउँथे)) _______।
)) ______ ______ले मोबास्टरलाई डोनाल्डको जीवनमा प्रवेश प्रदान गर्‍यो। उहाँ एक कुख्यात, पूर्ण, निन्दनीय वकिल हुनुहुन्थ्यो जसको दुबै कानुनी सेवा दुबै पुरुषले काम गरे। उनले एकपटक डोनाल्डलाई भने, 'सत्य कहिलै पनि पूर्ण हुँदैन। त्यहाँ धेरै तत्वहरू छन्। '
दिमागमा राख्नुपर्ने केहि चीज: पैसाको पछि लाग्ने क्रममा गतिशील व्यक्तिहरू निश्चित चीजमा बाँच्न सक्छन्। धम्की, हिंसा र pretern Natural वृत्ति।
अब ′ 78 डिग्री।
त्यो वर्षले करीव दशकको रूपमा चिनिन थाल्यो किनकि डोनाल्डले decade बाट अनियन्त्रित स्नातक गरे पछि) _______। धेरैजसो साथी व्यवसाय स्कूल ग्रेडहरू स्नातक हुनु भन्दा पहिले नै राम्रो अवसरहरू पाउँथे। डोनाल्ड? जन्ममा। By 8 सम्ममा, उनको प्रमुख उपलब्धीले पारिवारिक व्यवसायलाई)) बाट नाम परिवर्तन गरिरहेको छ _______ ________ _______ _____ अब प्रख्यात १०) '_______ ______ संगठन'। तर ′ 78 डिग्री एक विशेष वर्ष थियो।
′ 78 डिग्री द्वारा, उनका बुवा, ११) ____, सरकारको रडारमा थिए। 'मुश्किल' ले अज्ञात वायुप्रवाह मुनाफाको लागि लेखांकन गर्दैछ। साथै प्रमुख नागरिक अधिकार भेदभाव आरोप उसले कम्तिमा पनि समाधान गर्नुपर्‍यो, आफ्नो बुबाको उमेरलाई five वर्षमा twenty बर्षको उमेरको दोष स्वीकार्दैन। त्यसोभए त्यहाँ बुबाको आफ्नै सम्बन्ध थियो जुन उनीहरूको हो। त्यहाँ मुद्दाहरू थिए।
र, इमान्दार हुन, डोनाल्ड सही थियो। डोनाल्डको सहयोगमा, बुबा, ब्रूक्लिन क्वीन्स केटा, म्यानहट्टन बजारको राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्दै थिए। डोनाल्डले यसलाई बोनन्जा भनिरहे। शहरको ईतिहासमा प्रायः रिवाउन्डिंग रियल इस्टेट सौदाहरुको उपभोग हुन सकेको थिएन। आश्चर्यजनक कम्प्याक्ट टापुको महत्वपूर्ण क्षेत्र जुन म्यानहट्टन हो त्यो शहर अझै पनी स्वामित्वमा रहेको थियो। र शहर दिवालिया थियो। परफेक्टो। स most्कटले अधिकांश न्यू योर्कहरू, तर छोरा र बुबाको लागि भयre्कर अभावहरू देखायो? एक अवसर। कुनै भविष्यको बिन्दुमा पुनः प्राप्त गर्नका लागि, आजीवन सम्पत्तीमा एक पटकको फायरसेल मूल्य निर्धारणको आँखाको नानीमा बल्जको कारण हुनुपर्‍यो।
यसमा पहिलो चोटि बैंकरपट्टिले भाडामा लिएको फर्मको साथ थियो १२) ___________ ___________ ________। तिनीहरूले बिक्री को लागी डेरेलिकेट अन्तरिक्षको एक विशाल swath प्रबन्धित। विशेष गरी शहरको वेस्टसाइडमा सम्पत्ति थियो; हडसन नदीको नजिकै भूमि। यस बैंकरप्ट कम्पनीको acres 12 एकड जम्मा th 44 औं सडक रेल यार्ड थियो, जुन th० औं उत्तरबाट th th सम्म सडकमा पुगेको थियो; र दोस्रो ac 34 एकर ट्र्याक जुन th th औं बाट nd२ औं सम्म चल्छ। संयुक्त, साइटहरूले माथिल्लो पश्चिम तिर र मिडटाउनलाई वेवास्ता गरे। तिनीहरूले डोनाल्ड सम्पूर्ण शहर मा बिक्री को लागी बाँकी रहेको सबैभन्दा ठूलो जग्गा को प्रस्ताव राखे। असाधारण सम्भाव्यता, उसको बुबाहरूले सोचेको हुनुपर्छ। डोनाल्डले एक मुकुट परियोजनाको कल्पना गरे। उनले घमण्ड गरे, 'th० औं सडक साइटमा २०,००० भन्दा कम अपार्टमेन्ट र th 30 औं सडकमा १०,००० तल'।
डोनाल्डले एक पछि अर्को फर्ममा त्यो चिठी लेखे जुन सम्पत्तीको बिक्रीलाई हेरिरहेका थियो। प्रत्येक मिसिभ late 73 मा ढिला नभएसम्म अनुत्तरित थियो। सम्भवतः, बोरियतको स्थितिमा, फर्मको एक जवान निष्पादक, १)) ____________ ___________, एक चिठ्ठी प्रयोग गरियो। जिज्ञासु, लेखक एक कल प्राप्त भयो। डोनाल्ड ब्रूकलिन मा आफ्नो बुबाको कार्यालय मा बैठक को सुझाव दिए। 'त्यहाँ के गुमाउनुपर्ला?' सायद यो सोच थियो। बैठकमा डोनाल्डले एक चम्किरहेको, ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी आत्म प्रस्तुत गरे; शैतानले अन्य कुनै पनि लेकीलाई दिएको भन्दा बढी आकर्षणको साथ प्रदान गरियो। आत्मविश्वासको साथ फुस्दै, एक जना युवा डोनाल्डले उनीहरूसँग ईन्टामेन्ट गरे कि यी सबैको साथ। एक अधिकारीको नाम दिनुहोस्। शहरको भर्खर भर्खरै निर्वाचित मेयरको नाम आयो, १)) ______ _______। त्यसपछि एक आश्चर्य हिम्मत। भोलिपल्ट उनीहरू सबै सहर हलमा नयाँ मेयरसँग भेट्नुपर्दछ। त्यसका लागि केही पक्षलाई बोलाउनु परेको थियो। तर जसरी प्रतिज्ञा गरिएको थियो, एउटा लिमोले एक्जीक टिप्यो, र घमण्डी बुबाको साथमा, डोनाल्डले त्यस दिन जित्यो। महापौर, उनीहरु सबै पाँच खुट्टा दुई, पहिले बुबालाई ठूलो अ massive्गालो दिए, कार्यान्वयनतिर फर्किनु अघि र शपथ खाँदै, 'यदि मेरा साथीहरूले यस शहरमा केहि चाहन्छ भने, उनीहरूले यसलाई लिन्छन्।' उसले झुठ बोल्यो। तिनीहरूले गरेनन्। सक्षम नौकरशाहहरू, डोनाल्डहरू राख्छन् स्पष्ट रूपमा राख्ने कुनै इरादाको साथ, उनीहरू सबै बाटोमा पुगे। धेरै राम्रा कुराहरु भएन, किनकि डोनाल्डले पछि भने यो हुन सक्छ।
तर त्यसपछि हायात। एक साथी, १)) _______ ______ परामर्श दियो, 'डोनाल्ड कमोडोर किन्नुहोस् र यसलाई हयातमा रूपान्तरण गर्नुहोस्'। सुरुमा, डोनाल्ड बल्ले। निरीक्षण गरेपछि उनले इट्टाको अनुहार एकदमै मैला भेट्टाए। लबी यति गाह्रो थियो कि यो कल्याणकारी होटल जस्तो देखिन्थ्यो। Bums द्वारको नजिक पास थियो। भुइँ तल्ला? भण्डार गरिएको स्टोर। अझै, यो केहि थियो। यो ग्रान्ड सेन्ट्रलबाट केवल केही फिट खडा भयो। डोनाल्डका शब्दहरूमा, "जबसम्म त्यो शहर मर्दैन, लाखौं धनी मानिसहरू यस स्थानबाट दैनिक हिँडिरहने थिए। यो होटल थियो। छिमेकी होईन। ' सोधिएको मूल्य abatements र माफी हुन गइरहेको थियो। के झगडा भयो got१ बर्षे कर छुट थियो। सबैले भने, त्यसले उसलाई १११ मिलियन डलर बचायो जुन सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग भएको थियो।
कस्तो मायालु व्यवहार, उसको बुबाले सोचेको हुनुपर्छ, घमण्डीले भरिए। कमसेकम डोनाल्ड आफ्नो नाम जस्तै बेकार साबित हुँदैन। अझ राम्रो the औं औसत सम्पत्ति थियो, किनकि माथिको सम्झौता हयात साझेदारी थियो। त्यो एउटा, उनीहरूले ब्रान्डको नाम लिनेछन्। हाल, १ 5) ___ ____, यो th 16 औं र 56th औं औसतमा खडा भयो। यो एक storied स्थान र zip थियो। बस एक ब्लक टाढा भान्डर्बिल्टहरूद्वारा निर्मित १5 कोठा हवेली खडा गर्न प्रयोग गरियो। पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिको बाल्यकाल गृह, १)) _______ ________, केवल ढु stone्गाको टाढा मात्र थियो। नजिकै, रकफेलरहरू आफैं, सम्पत्ति स्वामित्वको पनि। योजना हवेलीहरू बीच एक सह-निर्माण भवन निर्माण गर्ने थियो। को-अप्समा, परिचालक निकायहरूले उनीहरूलाई मनपराउने कुनै पनि मानदण्डहरू स्थापना गर्न सक्दछन्। यसको मतलब कुनै मुद्दा छैन। बुबाले त्यसलाई माया गरेको हुनुपर्छ। यो सबैभन्दा अनन्य हुनेछ। क्लबबियस्ट चरम धन। त्यो तिनीहरूको नाम ब्रान्डको पर्यायवाची हुनेछ।
जनवरी ”० "।
अब एक धेरै dreary म्यानहट्टन को चित्र। यदि तपाईंले कहिल्यै तापक्रम अनुभव गर्नुभयो भने यति ठण्डा चिसो, तपाईंको औंलाहरु केहि यस्तो भएको छ जुन तपाईंले खराब गर्नुभयो, यो सम्झनुहोस्। त्यसपछि भीड, यातायात को एक मिश्रण मा फेंक र के रूप मा उत्साहित रातो बत्ती जस्तो देखिन्छ कि शरीर छिटो spurts मा सार्न को कारण राख्छ; सबै छोटो, मैला सडकहरू पार गर्ने प्रयासमा; पग्लनको मुठ्ठी जेब भित्र गहिरो भित्र shoved संग। र अझै पनी एक छेउमा, एक धेरै अनौंठो दृश्य। यसले रोकिएको हुन सक्छ; कमसेकम पज एक निर्माण दल पुरुषहरू - गोरा पुरुषहरू र सयौं मानिसहरू सबै पोशाकमा थिए। कोटहरूको साथ केही। केही होइन। मानौं कि अर्को भाषामा तिनीहरू बोले, 'यसलाई चिसो' भनेको के हो? किन तपाईलाई यति धेरै डर लाग्छ? '। र कसैले पनि कडा टोपी लगाएनन्। तातो भोडकाको प्लुमहरू सुगन्धित सास उनीहरूको अघि हावालाई क्रिस्टलाइज गरियो र उनीहरूको केही तातो स्रोतहरूको रूपमा सेवा गर्‍यो। तिनीहरू उठाइए र स्लेम्ड स्लेज हथौड़ा खुला हातहतियार।
साइट: भविष्य १ 18) _____ टावर।
वकिलको कार्यालयमा पहिलो बैठक सायद कसैको लागि अनौंठो थिएन। डोनाल्ड विनाशकारी दलको पछाडिको अवस्थाको बखान गर्दै थिए, हाम्रो भीडले आँखा चिम्लेनन। यी सबैको खुशीको कुरो हो कि यी सबै जनाको चुदाई प्यान्टमा ११116 औं पिसिन थियो। तर भित्र, ऊ उठेको। Bafangool Ugats tan tan। अझै, ऊ बस्यो, ढु stone्गाको सामना गर्यो, stogie बायाँ जुवामा दृढतापूर्वक सुरक्षित भयो, जिब्रो सधैं बाहिर अक्सर बाहिर निकाल्छ, यदि केवल नलगाइएको झोलालाई चिसो राख्नको लागि। उचाईमा, उनको शरीर केवल पाँच फुट चार मा कम्प्याक्ट थियो, तर ऊ लगभग or०० वा यति पाउण्ड मा अश्लील मोटा थियो; लाक्षणिक रूपमा समाजमा दैनिक gouging पछि शाब्दिक मासु मा रात मा gouging परिणाम। त्यतिन्जेल उनले धेरै सास फेर्थे। उहाँ त्यसबेला 300 or वा त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो जब उनी बसिन्थे, उनले क्रमशः लम्बाइ गरे। आफ्नो कालो फेडोरा द्वारा शीर्ष, १०० डलर क्युबन आफ्नो बोसोको अनुहारको मुखमा बिन्दु, उसले चरित्र देख्यो। केवल यस चरित्रलाई एउटा मोडमा फालिन्थ्यो। निस्सन्देह, आफूले सुनेको कुरा सुनेर ऊ डरायो। प्लस कसरी अगाडि स्टुगटज ननचल्यान्टले यसलाई सम्बन्धित गर्‍यो। स्टुगोट्ज जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको th 69 औं फ्रीकिन प्रवक्ता बन्ने थिए। उनले ला Island्ग आइल्याण्डको फर्मको बारेमा कुराकानी सुन्नुभयो, १)) ____________ _____________ _____ ____।
उनीहरूले पहिले कहिल्यै विध्वंस कार्य गरेनन्। तपाईं सोच्नुहुन्छ ... तपाईं अनौंठो! डोनाल्ड मालिकको कुरा गरिरहे। विन्डो टापुमा धुँदै .. तर ऊ 775$k मा आयो; सब भन्दा कम बोली। त्यसले उसलाई सहमति जनायो। Jerkoff सान्त्वना। डोनाल्ड कुरा गरिरहे। त्यहाँ करीव २०० वटा Undocumented आप्रवासीहरु थिए। चिनले बम्सलाई पोलिश ब्रिगेड भनिन्छ। स्पष्ट रूपमा, विन्डो वाशरको योनी पत्निले पोल्याण्डबाट सिम्को भर्ती गरे। कागज विज्ञापन राखियो। अब राज्यहरूमा, तिनीहरूले रातमा साइटमा चूहों जस्तै घुसपैठ गरे, माथिल्लो तलाहरू भाँचे, पुरानो एस्बेस्टोस कवर गरिएको पाइपिंग र भित्ताहरू खोदिरहेका थिए, विद्युतीय तारबाट बिजुली बगाए पनि। हप्ताको सात दिन, तिनीहरूले दिनको १ 200 घण्टा सम्म काम गरे, p under प्रति घण्टाको हिसाबले। कहिलेकाँही भोदकामा। साइटमा धेरै सुतेको थियो। मतभेदको स at्केतमा प्रायः निर्वासनको धम्की दिइन्थ्यो।
Fuckin मरोन, यो fuckin cocksucka!
हाम्रो परिचालक आँखा डोनाल्ड अझै पनी ढु stone्गाको सामना गर्नुपर्‍यो। आफूले सुनेको कुरा उसले विश्वास गर्न सकेन। चिनको स्थानीय 95,, हाउस रेकर्कर्स युनियनका पर्यवेक्षकहरू थिए। धेरै कुरा सुनेका थिए, उनलाई पहिले नै थाहा थियो। विश्वास गर्न सकेन। तर थाहा थियो। सामान्यतया, यो केहि चीजको साथ, र तपाइँ सम्झनुहोस्, सामान्य रूपमा यस्तो कहिल्यै कहिल्यै भएको थिएन, किनकि प्राय जसो विकासकर्ताहरू यस मूर्ख थिएनन्, बृहत गुंडहरू संख्यामा कारहरूमा ढेर गरी यसलाई अन्त्य गर्ने निर्णय हुनेछ, त्यसपछि तिनीहरूलाई बाहिर निस्किनेछ, उनीहरूलाई चकित पार्दै, तिनीहरू अघि बढ्दै जाँदा, सानो फौज, हातमा ब्याट्स सहित; एक जो कोही पोलकमा अल्फ जस्तो देखिन्थ्यो र आफ्नो प्वालमा २२ चोटि सर्दै थिए। तर हाम्रो अपराधीलाई केटाकेटीहरू चिन्छन् जुन डोनाल्डका बुवालाई राम्ररी थाँहा थियो। नेपोली, डेपोलो, र रेड हुक फ्रमाकिनमा टोमासेलोलाई दा मान्छे। त्यहाँ ती व्यक्तिहरू थिए जसलाई उनले सम्झनु पर्छ। अझै, कुनै हार्ड टोपी छैन, सस्तो बोज। प्रत्यक्ष तार शीश।
एक पटक ध्वस्त पारिए पछि - यदि यस झटकाले दा फ्रिकिन चीजलाई बिगार्न सकेन - उनीहरूले २० प्राप्त गर्न सक्दछन्) _______ त्यो बेला जब मुल्ला वर्षा शुरू भयो। तयार मिक्स चाँडो सुख्खा। हड्तालको लागि धेरै पेट छोड्दै। भुक्तानी शीर्ष डलर, मोरन। मानसिक शान्ति प्राप्त गर्नुहोस्। सम्पूर्ण प्रोजेक्टमा कुनै हडताल छैन।
र उहाँको वचनमा सत्य: शून्य स्ट्राइकहरू भयो। जब त्यहाँ एक शहरव्यापी हडताल थियो। यो शहर को सबै कंक्रीट डोनाल्ड गए जस्तै थियो। अधिकांश परियोजना, त्यहाँ वास्तवमा कुनै समस्या थिएन। यो एक पटक बाहेक समय जीसी, २१) _______ले इ England्ल्याण्डको रानीको रूपमा व्यवहार गर्ने प्रयास गर्यो र कुनै शो कार्यको बारेमा सबै छक्कलाग्दो भयो। Cocksucka त्यो दिन खाजाबाट फिर्ता आयो र कुरा ratcheted भयो कि पाए। त्यो जब उनले आफ्नो स्विचबोर्ड अपरेटर कर्ल अप पाए। उनी मानव बल जस्तै थिइन, झोलामा टाउको भित्रिरहेकी थिइन। कार्यालय रद्दीटोकरीमा थियो। ठोकरहरू मार्फत, उनले अन्ततः यसलाई बाहिर निकालिन्। चक्कुको बारेमा। उनी वास्तवमै थिएन। उनको स्वरयन्त्रमा भएको ठाउँ जहाँ गुन्डाले यसलाई जबरजस्ती राखी रहेकी थिइन कि अत्यधिक रक्तस्राव भइरहेको थिएन, तर उनको लिली सेतो घाँटीमा स्थायी छाप छोड्नेछ। त्यस दिन पछि जीसीको साथ वकिलले फोनमा कुरा गर्यो। मुद्दाहरूको धम्की दिएपछि र सरापको एक लिटानी फ्याँके पछि, सन्देश वास्तवमै स्पष्ट भयो।
अन्तमा, ′ 88 डिग्री।
म्यानहाट्टनको फेडरल कोर्टरूम भित्र चित्र। प्रेस: ​​उनीहरूले यसलाई आयोग ट्रायल भने। मानौं, यसमा सबै डनहरू थिए। केवल एक चीज। भीड डोनाल्ड संग एक बैठक। ऊ फिज हेड थियो। चिन, उहाँ वास्तविक चीज हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो दशक, उनीहरूले कसरी फेडहरू खेलेछन्। र यसले काम गर्यो। Fuckin फीड चिन अर्को 10 बर्ष बाहिर फिगर छैन। यसै बीच, ११116 औंबाटका भीडले चार्ज भयो र शताब्दी र त्यसपछि केहीलाई सजाय सुनायो। यसले नराम्रोसँग चोट पुर्‍यायो। त्यहाँ मियामी बीचमा bed बेडरूम हवेली, व्याकरणको in बेडरूम पेन्टहाउस र राइनबेकमा १7शयनकक्ष घोडा फार्म छ। त्यहाँ स्कुन्गल्ली, फाईल मिगोन, ताहितीको यात्रा थियो, जहाँ उनीहरूले कुखुराको मासु बनाएको सास यति टाँगो थियो, स्वाद तपाईंको मुखमा विस्फोट हुन्छ। ऊ प्रायः रक स्टार र चलचित्र सेलेब्स ईर्ष्या गर्ने जीवन बिताउने थियो। अब यो सब एक freakin कंक्रीट बक्स को लागि आदानप्रदान भइरहेको थियो। सबै किनभने फेड्स आफ्नो स्थान तार गर्न को लागी प्रबंधित, तब सबै कम जीवन, टुक्रा आह छिटो, चूहा मुथ्फुकस tattled। उसलाई चेतावनी दिइएको थियो। तर अझै, त्यो छिटो चोट। सबै गरे।
जस्तै जब अभियोजन पक्षले उनलाई –at his– his उसको बक्सबाट उठेको थियो र उसलाई कुर्सीमा खसाल्दै थियो। अब उनीहरू क्याथरिनको दुर्दशा ल्याउँदै थिए। 76० मा कसरी उनी अहिले आफ्नै बक्समा बस्दै थिइन्; बहिनीको ब्रोंक्स घरमा उनी पनि उभिन सक्दिनिन। हवेलीहरू र पेन्टहाउसहरूबाट छोडियो सबै सम्पत्ति गत्ता बक्सहरूमा भित्र राम्ररी भरियो। प्रत्येक महिना अब, क्याथरिनले उनकी दिदीलाई उनको सामाजिक सुरक्षा चेक बनाई, जुन उनका शो शो गिग्स सौजन्यसाथ आउँथि। र अब उसको अगाडि रहेका यी गधाहरूले त्यो अन्त्य गर्ने धम्की दिइरहेका थिए। सहयोग भनेको उनीहरूलाई ब्यान्डि to मन पराउने शब्द थियो। लाइफलाइन जस्तो पिच। त्यहाँ क्षणहरू थिए…। शीश। केवल उनले तर्कसंगत बनाउन सक्थे किन उनले उनीहरुलाई अस्वीकार गरे। हेर्नुहोस्, यो मूल क्याथरिन पनि गएको थियो। उनी ताहिती र कुखुराको यात्राको रमाईलो गरेकी थिइनन् अचम्मै सासको साथ। त्यसैले अब, तिनीहरू या त लायकका सबै लाजमर्दो थिए।
के मारियो त्यो केवल फिगर हेड थियो। एक प्यादा वास्तवमै। तर यो उसलाई राम्रो तिरेको थियो। उसले सम्भवतः चिन भन्दा बढि कम्मर कसेको थियो। जब उनीहरूले उसलाई जनसंख्यामा छोडिदिन्छन्, तब उसले केटाहरूलाई यो भन्नेछ। पुरुष तिनीहरूको's० को,'s० र's० को। यो एक संघीय अधिकतम थियो। त्यसैले कहिलेकाँही आश्चर्यहरू पनि भए। जस्तै जब उनी निनो 'दि बार्बेरियन' रिक्सी भेट्टाए। १30 औं र लेनोक्सबाट लिजेन्ड। हाम्रो एक भीडको बाल्यकाल मूर्तिहरू। 'बार्बेरियन' एक शताब्दीमुनि हुन सक्दैन, उनले जोड दिए। उनको प्रधान तेरानोवाको शासनकालभरि थियो। सम्भवतः घोडा, पुरानो गिजर देखि मान्छे क्लिप। अफवाह यो थियो, आफ्नो युवा दिन मा, 'बार्बेरियन' उसले खासै मन नपराउने भिक्सहरुका लागि प्वालहरू खोल्न मनपरायो। उसले पक्का गर्‍यो कि उनि मैलामा फाल्नु भन्दा पहिले उनीहरू थोरै सास फेरे। चिहानलाई ओछ्यान लगाइसकेपछि ऊ कहिले कतै बाहिर निस्कनु अघि गनगनाउने आवाज सुन्नमा छक्क पर्दछ।
मनोचिकित्सक हत्यारा अब प्राय: दिन ह्वीलचेयर भित्र फ्याँक्न सकिन्छ। ऊ अब एक मान्छेको टहनी थियो, उसको जेल ब्लुज जस्तै उनीहरूले उसको पुरानो, सुक्खा रैंक छालाको शीर्षमा बन्डल भएको जस्तो देखिन्थ्यो। उसको खोल अब एउटा सुस्त, टक्कल टाउको द्वारा मुकुट गरिएको थियो, र तिनीहरू राखिएको आधा पागल आँखा सँधै टाढाको दृष्टिमा अड्किन्थ्यो। 'बार्बेरियन' व्यावहारिक रूपमा catatonic थियो। खराब। ऊ आफैंलाई पेशा गर्ने थियो। त्यो हाम्रो भाग्यशालीसँग डराएको भाग्य हो। क्याटाटोनिक लुक र मूत्र। उसको बाल्यकाल मूर्ति। केवल एक चीज उसले डराएको हुन सक्छ केवल मुसा। वास्तविक। रातभरि, उनीहरूको कुकुरले उनको ईरड्रम्सलाई दु: ख दियो। उनीहरूको दृश्यमा, क concrete्क्रीट भित्तासँगै स्काइरि, गर्दै, तिनीहरूको विशालता लम्बाई भयो, वर्ग खैरो नाक, नक्कल व्हिसकर, मनको आँखा, तीखा दाँत, आक्रमणको डर। त्यहाँ कथाहरू थिए। तिनीहरू मध्ये केही प्रमाणित। यो डर थियो कि उहाँलाई धेरै रात राख्यो। काखाको अनियन्त्रित फिटले केही सहयोग गरेन। तर अब या त उनको बन्क्मेट वा वा आफैंबाट वायु निकासीको हिसाबले हेर्नु, जुन उनीहरूको बक्सलाई लामो बर्ष सुगन्धित पनि बनाइएको थियो। त्यसपछि जनसंख्या मा फिर्ता। केटाहरूको वरिपरि, उसले सम्झने छ कि ऊ एक गुंड थियो।
ऊ freakin प्रफुल्लित हुन सक्छ। तर मतलब कहिलेकाँही पनि। उदाहरण को लागी, पतितहरु को बारे मा कथाहरु थिए जो आफ्नो अन्तिम पैसा को जुवा खेल्ने थियो; उहाँसँग कसरी उनीहरुलाई पैसा तिर्नको लागि एउटा विशेष तरिका थियो जसमा उनले तातो हुने गर्थ्यो, जबकि अरू कसैले ठीकसँग लुगा लगाए - नग्न अवस्थामा। र विकासकर्ताहरू! विशेष गरी, ती केटाहरूलाई डोनाल्डको बारेमा कथाहरू मन पराउँथे।
एउटा सस्तो सिगार अब पक्राउ, ऊ सधैं सुरु गर्यो, 'म यस बकवास मान्छेलाई मार्न चाहान्छु।'
केटाहरूले हर्षोल्लास हावाका साथ दंगा गर्ने थियो।
ऊ नाटकका लागि स्नीर चाहन्छ।
उसको दिमागको आँखामा, उसले अझै पनि एउटा हातमा प्रत्यक्ष तारको साथ ला the्ग पोलकहरूको चित्रण गर्न सक्दछ। केहि चोटि अर्कोमा एक कप बोज। उनले पनी कुन गुन, चीकी 'क्र्याकडपट' फमा सम्झे कि उनले स्विचबोर्ड अपरेटरको गलामा ब्लेड टाँस्न पठाएको हो। यी सबको हिसाब गर्दा Cheeky maniacally हँसेको थियो। उनीको बारेमा उनको मात्र दु: ख थियो कि यो डोनाल्ड थिएन। तर बुबाले विचार गर्नुपर्ने थियो। त्यसोभए हाम्रो घुमाउरोले त्यस गिगको माध्यमबाट दौडेको सबै नगदको बारेमा सोच्न थाल्नेछ। उसले हालसालै यो सुनेको थियो कि स्टुगटजको मूल्य अरबौं हुन सक्छ।
'Cocksucka दा ठोस थियो,' कहिलेकाँही उनी घोर्राई गरे।
उत्तर पुस्तिका: १) 'फ्याट टोनी' सालेर्नो, २) 'ट्रिगर माइक' कोप्पोला,)) लुसियानो,)) 'बिग पॉल' कास्टेलानो,)) गाम्बिनो,)) एस एण्ड ए,)) रोय कोहन,)) वार्टन,)) एलिजाबेथ ट्रम्प र छोरा, १०) ट्रम्प, ११) फ्रेड), १२) पेन सेन्ट्रल रेलमार्ग, १)) एडवर्ड आइकलर, १)) अबे बीम, १)) भिक्टर पाल्मेरी, १)) बोन विट, १)) थिओडोर रुजवेल्ट, १)) ट्रम्प, १ 1 ) कास्यान्स्की एण्ड सन्स ठेकेदार, २०) बिफ, २१) इरि F फिशर।
सांप्रदायिक समाचार ट्रम्प माफिया
म लेखक हुँ
Libor कार्यान्वयन रहन, विदेश मार्केट ताप को अप हो
धर्म र दर्शन बीचको प्रतिस्पर्धा